Bilaogera Arabo nitaky ny famotsorana ireo mpikatroka mpiaro ny zon’olombelona tany Syria · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Avrily 2019 3:44 GMT
(Marihina fa tamin'ny volana Janoary 2014 no nivoahan'ny lahatsoratra teny Anglisy)
Manohana ny famotsorana an'i Razan Zaitouneh, mpisolovava mpiaro ny zon'olombelona sady mpiara-manorina ny Foibe Mitatitra ny Fanitsakitsahana ny Zon'olombelona ao Syria (SVDC) – vondron'ny sivily tsy mila herisetra mitantara ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona ao Syria nanomboka tamin'ny volana Martsa 2011 ny mpandray anjara tamin'ny Fivorian'ny Bilaogera Arabo Fahaefatra. Nalaina an-keriny tamin'ny 9 Desambra 2013 tany ambanivohitr'i Damaskaosy niaraka tamin'i Samira al-Khalil, Wael Hamada ary Nazim al-Hamadi, izay mpikambana ao amin'ny SVDC avokoa i Ramatoa Zaitouneh , 36 taona, izay niara-nahazo ny loka Sakharov avy amin'ny Vondrona Eoraopeana noho ny asany momba ny zon'olombelona.
Tao anatin'ny 33 volana taorian'ny fipoahan'ny fitroarana Syriana, nanjary loharanom-baovao lehibe ho an'ny vondrom-piarahamonina iraisam-pirenena momba ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona ao amin'ny firenena ny asa nataon'i Razan Zaitouneh niaraka tamin'ireo mpiara-miasa aminy tao amin'ny SVDC. Nanjary zava-dehibe kokoa noho ny hatramin'izay ny asan'ny SVDC rehefa nandray ny fanapaha-kevitra mampalahelo ny Firenena Mikambana tamin'ny tsy tokony hanaraha-maso ny isan'ny maty tany Syria.
Niasa tao anatin'ny toe-draharaha tena sarotra i Razan sy ny mpiara-miasa aminy, nanao vy very ny ainy mba hanatontosana ny asa manan-danja mba hahatakarantsika ny olan'ny vahoaka Syriana. Toy izany ihany koa ireo maro hafa, toa an'i Bassel Safadi, bilaogera mpiara-miasa – izay tany am-ponja nanomboka ny volana Martsa 2012 – ary niasa tamin'ny fampiroboroboana ny teknolojia open-source ho maimaim-poana sy malalaka, ary tena banga tokoa ny tsy fahatongavany tamin'ny Fihaonamben'ny Bilaogera Arabo Faha-4, izay natao ny 20 ka hatramin'ny 23 Janoary 2014 tao Amman, Jordania.
Amin'ny maha-vondrom-piarahamonina antsika dia manana andraikitra isika hiray hina amin'ireo mpikatroka manohana ny fahalalaham-pitenenana sy mampiharihary ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona eo amin'ny adidy amin'ny maha-olombelona hiombonantsika.
Mitaky amin'ny Firenena Mikambana sy ny firenena rehetra nandray anjara tamin'ny Fihaonamben'ny Fandriampahaleman'i Afovoany Atsinanana tao Geneve II izahay ato amin'ny AB14 mba hametraka rafitra azo antoka mba hiarovana sy hanomezana antoka ny famotsorana ireo gadra noho ny fanehoan-kevitra sy ireo nalaina an-keriny tany Syria.